🥇 Barnaamijka iibinta alaabada
Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 654
Barnaamijka iibinta alaabada
Fiidiyowga barnaamijka iibinta alaabada
Dalbo barnaamij iibinta alaabada
Ku iibinta dukaanka - nooc gaar ah oo waxqabad la xidhiidha iibinta alaabooyin cayiman - qaybo hanti ah (badiyaa dharka, marar badan - kabo, qalab, iwm.), Ku harsan keydka. Xisaabinta ayaa sida caadiga ah ku lug leh haynta dhammaan noocyada diiwaanada iyadoo qayb weyn oo ka mid ah diiwaanada keydka iyo iibka. Habka ugu kalsoonida badan uguna fudud ee barnaamijka dukaanku si buuxda ugu shaqeyn karo waa barnaamij iibinta alaabada. Barnaamij kasta oo loogu talagalay iibinta badeecadaha waxaa loogu talagalay inuu abaabulo shaqada shirkad ganacsi, dardar-geliyo geeddi-socodka xogta iyo nidaaminta, iyo inuu caadi ka dhigo socodka shaqada (gaar ahaan, shaqada waaxda iibka). Maamulayaasha qaar, iyagoo tixgelinaya inay heleen hab ka raqiisan oo ay ku iibsadaan barnaamijka iibinta alaabada, waxay go'aansadeen inay kala soo baxaan barnaamijka iibinta alaabada internetka iyagoo weydiinaya barnaamijka weydiinta goobta baaritaanka inay ku iibiyaan badeecado bilaash ah ama barnaamijyo lagu iibiyo badeecad bilaash ah. Waa in loo sharaxo in qaabkan dhibaatadu uu gebi ahaanba khaldan yahay oo kaliya uusan wiiqi karin kalsoonidaada barnaamijyada xisaabinta otomaatigga ah, laakiin sidoo kale wuxuu horseedi karaa luminta macluumaadka. Xaqiiqdu waxay tahay in barnaamij kasta uusan daryeeli doonin dayactirka barnaamijka bilaashka ah ee iibinta si loo xakameeyo iibinta alaabada (iyo haddii ay sidaas tahay, ma ahan iyada oo aan la helin kicinta sida lacagta oo kale), iyo baahidaan ah taageerada farsamada goor dhow ama ka dib ayaa hubaal ah muuqan. Si kale haddii loo dhigo, khubarada oo dhami waxay kugula talinayaan kaliya barnaamijka iibinta laga soo iibsaday horumariyeyaal lagu kalsoon yahay.
Barnaamijka ugu kalsoonida badan ee iibinta alaabada iyo xakamaynta kaydinta - USU-Soft. Barnaamijkan iibinta alaabtu wuxuu leeyahay faa iidooyin badan waxyaalaha analoogyadiisa ah wuxuuna awood u leeyahay inuu si dhakhso leh u muujiyo natiijooyinka ugu fiican. Waxaa lagu gartaa tayada sare ee fulinta, fududaanta isticmaalka, kharashka miisaaniyada wacan iyo barnaamijka dayactirka cadaalada. Soosaarayaasha USU-Soft waxay leeyihiin sumad caalami ah oo kalsooni D-U-N-S ah, oo xaqiijineysa aqoonsiga barnaamijkan iibinta ee maaraynta alaabada adduunka oo dhan inuu yahay mid ka mid ah wax soo saarka ugu tayada sareeya ee alaabada lagu iibiyo. Barnaamijka iibinta ee maaraynta badeecadaha kaa caawinaya inaad fududeyso iibinta alaabada ayaa kuu ogolaanaya inaad isticmaasho oo kaliya qalabka caadiga ah ee dukaanka (keydka iyo qalabka bakhaarka - qalabka baarcode, daabacadaha risiidka, sumadaha, iwm), laakiin qalab gebi ahaanba cusub taas oo aaney wali dukaamada oo dhami ku guuleysan - xarumaha casriga ah ee lagu ururiyo xogta (DCT). Kani waa aalad yar oo is haysta, oo shaqaaluhu si fudud ugu qaato jeebkiisa una isticmaalo sida loogu baahan yahay. Tusaale: si aad u sameysid alaab, adigu waad isticmaashaa oo waqti badan ayaad badbaadisaa. Xogta waa la akhriyaa ka dibna waxaa loo wareejiyaa keydka weyn. Aaladda ayaa awood u leh inay keydiso qadar xog ah, oo ah mid lagu daray. Sidaa darteed, xitaa waxaa jira waxyaabo aad u tiro badan oo ku jira bakhaarada, waad ku dari kartaa dhammaantood keydka macluumaadka iyo awoodda keydinta ee nidaamka iibinta xisaabinta waa mid aan xad lahayn.
La shaqeynta macaamiisha sidoo kale waxay mudan tahay fiiro gaar ah. Macluumaadka ku saabsan macaamiisha waxaa si toos ah looga gali karaa miiska lacagta. Tusaale ahaan, waxaad geleysaa nidaamka xisaabaadka ee iibinta iyo maamulida maamulka magaca, magaca, magaca aabbo ee macmiilka, iyo sidoo kale da'da uu isagu ama iyadu tahay, haddii la doonayo, dookhiisa ama wixii la mid ah. Macaamiil kasta waxaa la siiyaa gunooyin iibsi kasta. Waxaan u maleyneynaa inaysan jirin wax micno ah oo sharraxaya waxa nidaamka gunnadu yahay, maxaa yeelay dukaamada oo dhan waxay muddo dheer adeegsanayeen istiraatiijiyadan soo jiidashada iyo haysashada macaamiisha. Dad yar ayaa iska caabin kara fursadda ah inay adeegsadaan gunnooyinkan la soo ururiyey halkii ay lacag ka isticmaali lahaayeen oo alaabo badan ka iibsan lahaayeen dukaankaaga. Waxaad arki doontaa iibsadaha uu macaamilku iibsado oo uu gunnooyinka qaato. Markaa, waad fahmi doontaa wuxuu isagu ama iyadu doorbido oo sidaas ayaad adigu xayeysiin u dirtaa oo aad u soo bandhigtaa inaad wax kale iibsato, kuna dhiirrigeliso isaga ama iyadu inay intaas ka sii kharash gareeyaan Macaamiisha ayaa sidoo kale loo qaybin karaa qaybo si loo fududeeyo marinka keyd weyn oo macluumaad ka haya macaamiil aad u tiro badan. Maamulka macaamiisha waa waxa lagama maarmaanka u ah urur ganacsi kasta.
Qeybintaani waxay ku saleysnaan kartaa shuruudo kala duwan: iyadoo lagu saleynayo tirada booqashooyinka (macaamiisha caadiga ah iyo kuwa dhifka ah); iyada oo ku saleysan joogitaanka ama maqnaanshaha cabashooyinka (kuwa aan waligood caban iyo kuwa sameeya mar kasta); iyada oo ku saleysan iibsiyada qaarkood, da'da, dariiqa ay degan yihiin, iwm. Macaamiisha qaarkood xitaa waxay u qalmaan in la siiyo xaaladda VIP iyo dhammaan mudnaanta ay u baahan yihiin in la siiyo. Iyo inaad had iyo jeer laxiriirto macaamiishaada, waxaad adeegsankartaa 4 qaab oo xiriir ah - Viber, SMS, emayl iyo xitaa wicitaan cod. Waad diri kartaa xayeysiis, buugaag, dalabyo gaar ah, qiimo dhimis, ama ku martiqaad munaasabadaha, ugu hambalyeyn ciidaha, waad ku mahadsan tahay wax iibsashada, waxaad u sheegi kartaa soo-galootiga cusub ee badeecadaha iyo waxyaabo kale oo badan.
Ma rabtaa inaad iska ilaaliso khaladaadka markaad la shaqeyneyso alaabada iyo iibinta? Ma dooneysaa inaad u wareejiso qaar ka mid ah shaqada kali kali ah mashiin kaas oo si fiican oo dhaqso badan wax uga qaban kara? Miyaad dooneysaa inaad sifiican u hagaajiso meheraddaada si tartamayaashaadu ay dib uga haraan? Markaa xor ayaad u tahay inaad doorato barnaamijkeena iibinta ee xakamaynta iyo otomaatiga. Waxaan damaanad qaadaynaa waxaas oo dhan, iyo xitaa in ka badan. Waxaan u isticmaalnay inaan si farxad leh uga yaabino macaamiisheenna. Boggayaga rasmiga ah waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay, iyo sidoo kale inaad kala soo bixi karto nooc demo oo bilaash ah si aad ugu rakibtid shirkaddaada oo aad u hubiso haddii wax walba oo aan kuu sheegno ay run yihiin iyo in kale. Waxaan kuu xaqiijin karnaa in nidaamkayaga gaarka ah ee otomaatiga iyo casriyeynta ganacsiga aysan ku niyad jabin doonin waxaadna hubaal ubaahan doontaa inaad sii wadato adeegsiga! Nala soo xiriir si kasta oo aad jeceshahay. Had iyo jeer waan la xiriirnaa waana ku farxi doonaa inaan ka jawaabno su'aalo kasta oo aad qabtid.